Naya Bikalpa | » रामचन्द्रजी र हामी एकै ठाउँमा छौं, तर कतिपय कुरामा उहाँसँग चित्त बुझ्दैन रामचन्द्रजी र हामी एकै ठाउँमा छौं, तर कतिपय कुरामा उहाँसँग चित्त बुझ्दैन – Naya Bikalpa
रामचन्द्रजी र हामी एकै ठाउँमा छौं, तर कतिपय कुरामा उहाँसँग चित्त बुझ्दैन
प्रकाशित मिती: २०७६ माघ २०, ०६: ५१: ५९
नेता÷केन्द्रीय सदस्य, नेपाली काँग्रेस
नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली तथा लोकप्रिय नेता डा. शेखर कोइरालाको राजनीतिक पृष्ठभूमि, बाल्यकालदेखि कै हो ।
निर्वासनमा परिवारका सदस्यहरुकासाथ बाल्यकाल बिताएका डा. शेखर कोइराला राजनीति र चिकित्सा पेशालाई सँगसँगै अघि बढाउँदै आएपनि २०५८ सालदेखि राजनीतिमा मात्रै केन्द्रीत हुनुभएको छ ।
डा.कोइराला परिवारको राजनीतिक विरासतलाई आफ्नो योग्यता, क्षमता र निरन्तरताका कारण झन् उचाइमा पु¥याउने गरी आमकार्यकर्ताको विश्वास जित्न सफल कोइरालालाई काँग्रेसको निकट भविश्यको आशा लाग्दो र भरपर्दो नेताको रुपमा काँग्रेसी कार्यकर्ता र शुभेच्छुकले लिने गरेका छन् ।
उनै नेता डा. शेखर कोइरालासँग नयाँ बिकल्प साप्ताहिकका लागि हाम्रा विशेष संवाददाताले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः
नेपाली काँग्रेसभित्र लामो समयदेखि बढ्दै गएको विवादहरु टुङ्गिएर पार्टीमा एकता भएकै हो त ? तपाई के भन्नुहुन्छ ?
नेपाली काँग्रेस पार्टीभित्र एकता नै थियो नि त्यस्तो के थियो र ? एजेण्डाहरुमा विमति हुनुु स्वभाविक हो । अहिले पनि धेरै कुराहरु यस्ता छन्, जो कि विवादित नै छन् । विधिसम्मत छैैनन्, विधानसम्मत छैनन् । कार्यतालिका आएको छ र हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
कार्यतालिका त आयो तर मुख्य महाधिवशेनमा फेरबदल नभएको नै हो त ?
मुख्य महाधिवेशनमा फेरबदल भएन तर प्रमुख कार्यतालिका तपाईहरुले मुख्य महाधिवेशन भन्नुहुन्छ तर मैले वडादेखि जिल्ला र प्रदेशसम्मको कार्यतालिकालाई लिन्छु । आफ्नो आफ्नो सोंचाई हो । तपाईको सोंचाई फागुन ७ गते होला । मेरो सोचाई अर्कै छ । वडा देखिकै अधिवेशन हुन सकेन भने त्यो मान्य नै हुँदैन । हाम्रो अहिले आएको कार्यतालिकामा विवाद छैन ।
तपाईले कार्यतालिकामा विवाद छैन भनेर भन्दै गर्दा के अरु विषयमा चाहि अझै विवाद छ भन्न खोज्नु भएको हो त ?
महाधिवेशनको विषयमा केही धाराहरु निलम्बनमा छन् । केही धाराहरु आउँदो बैठकमा छलफल हुन्छ र त्यसलाई अगाडि बढाइन्छ । त्यो पनि ठिक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । दोस्रो कुरा अहिले विवादको इस्यु भनेको ने.वि संघ हो, जो अहिले गम्भीर मोडमा छ । तरुण दल अहिले पनि चार जना बाट नै चलाई रहनु भएको छ । विभागहरु गठनको विषयमा यि तिन चार वटा विषयमा विवाद नै छ । नेपाली काँग्रेस पार्टीमा शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी र सिटौलाजी मात्रै हुने भए भइहाल्यो । हामी किन चाहियो ? केन्द्रीय सदस्यहरु किन चाहियो ? हामीहरुको विचार के छ भनेर त अहिले छलफल नै भएको छैन नि !
त्यसोभए यसमा तपाईहरु र नेपाली काँग्रेस पार्टीको विचार के छ त ?
चार वर्षसम्म पनि विभाग बनेन अब कसैलाई खुसी पार्नलाई, भोट तान्नलाई विभाग बनाउने हो भने त्यसको कुनै औचित्य छैन । त्यो पनि २८ वटा विभागबाट ४७ वटा विभाग विधि सम्मत हिँड्नुप¥यो नि । पार्टी विधि सम्मत हिँडेको छैन भनेर न हो हामीले विवाद गरेको हामीले भागवण्डाको लागि विवाद गरेको होइन ।
नेपाली काँग्रेस पार्टी फेरी भागवण्डामा नै गएको हो त ? तपाई के भन्नुहुन्छ ?
होइन, नेताहरु जानुभयो, शिर्ष नेताहरु भागवण्डामा जानु भयो भने मलाई भन्नु केही छैन । तर म त केन्द्रीय समितिमा आफ्नो कुराहरु राख्छु । जब केन्द्रीय समितिमा यो कुरा उठ्छ तब यो कुरा राखौला । त्यसमा के छ भने ने.वि.संघको इस्यु छन्, अर्को विभागको इस्यु छ र अर्को भातृ संस्थाले सदस्यता वितरण गर्ने इस्यु छ । यो तिन वटा इस्युको विषयमा हामीले आफ्नो कुराहरु राख्नुपर्छ । नेपाली काँग्रेसको विधानलाई मिचेर तपाई जान थाल्नुभयो भने कसरी हामीले आफुलाई लोकतन्त्रवादी पार्टी भन्ने ? अरु पार्टीहरुलाई लोकतन्त्रको पाठ सिकाउने अनि हामी आफै चाही लोकतन्त्रवादी नबन्ने हो भने कसरी अगाडि बढ्छ पार्टी ?
नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ताहरुले पहिला नेताहरु सुध्रिनु प¥यो र भिजन दिनुप¥यो भन्छन् पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने तपाईको सोंच छ ?
तपाईले एकदम सही कुरा भन्नुभयो । म यसको समग्रमा व्याख्या गरेर भन्छु । एक किसिमका कार्यकर्ताहरुले नेपाली काँग्रेस पार्टी विधि र विधान समत छैन भनेर भनेको छ । अहिले नेपाली काँग्रेसका शिर्ष नेताहरु त्यसमा सबै समूहको कुरा गर्दै छु । नेपाल विद्यार्थी संघको इस्युमा विधि सम्मत हिँड्न चाहनु भएको छैन ।
केही साथीहरुले यतिसम्म भन्दै हुनुहुन्छ कि नेपाल विद्यार्थी संघको उमेरको हद चाही ने.वि. संघको १२औं महाधिवेशनपछि लागू हुन्छ । २० वटा जिल्लामा त महाअधिवेशन भइसक्यो ३२ वर्षभन्दा मुनिका केटाहरुको जिल्ला अधिवेशन भयो । आउने १४ फागुनमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव छ । ५० वर्षको मानिसहरुले उम्मेदवार घोषणा गर्ने र भोट कसले हाल्ने ? भन्दाखेरी २८÷३० वर्ष उमेरका युवाहरुले भोट हाल्छन् ।
नेपाली काँग्रेसको विधानलाई टेकेर त हिँड्नुप¥यो । नेपाली काँग्रेसको विद्यानमा नौ ओटा महामन्त्री बनाउने भन्ने छ, जे मन लाग्छ त्यही गर्दै जाने ? उहाँहरु मिल्नु हुन्छ भन्ने त्यो त स्वीकार्य हुँदैन नि । त्यही कारणले अस्ति ने.वि. संघमा झगडा भएको हो ।
शिर्ष नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा र कृष्णप्रसाद सिटौलाले त सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे नि, तपाई के भन्नुहुन्छ ?
उहाँहरु मिल्नुभयो राम्रो कुरा हो । मैले मिल्नु भएन भनेर भनेकै छैन । शेरबहादुरजी, सिटौलाजी र पौडेलजी मिल्नुभयो । जो व्यक्तिहरु विधि सम्मत हुनुपर्छ भनेर सभापतिहरुलाई निर्देशन दिँदै हुनुहुन्थो त्यही व्यक्तिहरु आज विधिसम्मत हिँड्न चाहनु भएको छैन । यो कुरा त हामी बोल्छौं नि, बोल्ने बेलामा बोल्छौं ।
शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई पेलेर लगिसक्नुभयो तपाईहरुको काम बोल्ने बाहेक के नै छ र होइन त ?
कसले पेल्यो, पेलेन भन्दा पनि महाअधिवेशनले देखाउँछ त्यो कुरा । दोस्रो कुरा २८ वटा विभाग दुई महिनाभित्र गरिसक्नुपर्छ भनेर नेपाली काँग्रेसको विधानले भन्छ । चार वर्ष वितिसक्यो, अधिवेशनको मितिको टुङ्गो भइसक्यो । महाअधिवेशनको कार्यतालिका डिक्ल्लेयर भइसक्यो । अहिले आएर नेपाली काँग्रेस पार्टीभित्र ४७ वटा विभाग बनाउँछु भनेर सभापतिजीको समूह लाग्नु भएको छ । रामचन्द्रजीको समूह २८ विभाग बनाउँछु भनेर लागिरहनु भएको छ ।
विभाग बनाउनै हुँदैन । किनभने अब विभाग बनाएर त्यसले काम गर्दैन । अब त महाधिवेशनको प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्नुप¥यो । नेपाली काँग्रेसको विधाननै भातृ संस्थालाई नेपाली काँग्रेसको सदस्यता वितरण गर्ने भन्ने छैन । नियमावलीमा उहाँहरुले जबरजस्ती हामीहरुले बोल्दा बोल्दै पनि भातृ संस्थालाई सदस्यता वितरण गर्ने अधिकार दिनुभयो, त्यसले नेपाली काँग्रेस पार्टीलाई कमजोर बनाउँछ कि बनाउँदैन ? लोकतन्त्र कमजोर बनाउँछ कि बनाउँदैन विधिसम्मत हिँडेन भने ? यो कुराहरु त हामी राख्छौं । रामचन्द्रजी र हामी एकै ठाउँ उभिएका छौं । तर कतिपय कुराहरुमा उहाँसँग चित्त बुझ्दैन, त्यो चित्त नबुझेका कुराहरु केन्द्रीय समितिमा राख्छौं । हुनसक्छ नोट अफ डिसेन्ट पनि लेख्छौं ।
नेपाल विद्यार्थीसंघको उमेर हदको विषयमा तपाईको व्यक्तिगत टिप्पणी के छ त ?
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावमा २८ वर्ष मुनिकाले भोट हाल्ने, ने.वि संघको उमेर हद भनेर विधानमा लेख्ने, २० वटा जिल्लामा ३२ वर्ष उमेरभन्दा मुनिका अधिवेशन भइसकेका छन् । अनि केही सिनियर साथीहरु चाही विधिसम्मत छ भनेर भन्नु चाही हाँस्यास्पदको कुरा हो । १२औं महाधिवेशनका लागि २० वटा जिल्लाको त भइसक्यो ।
नेपाली काँग्रेसभित्र शेरबहादुर देउवा सर्वैसर्वे हो त ? उहाँले जे भन्यो पार्टीभित्र त्यही हुन्छ ? तपाईलाई के लाग्छ ?
किन कसरी सर्वैसर्वा हुनु ? उहाँले जे भन्यो त्यही कहाँ भएको छ ? अहिले धेरै इस्युहरु छन् । नेपाली काँग्रेस पार्टीले राष्ट्रिय सभामा एउटा पनि सिट जितेन । हामी आफुलाई लोकतन्त्रवादी भन्छौं । राजपा र संघीय समाजवादीसँग मिलेर हामीले चुनाव लड्न पर्दैनथ्यो ? हाम्रो कति ठूलो क्षति भएको छ ।
तर सभापति शेरबहादुर देउवा त राजपा र समाजवादी पार्टीसँग मिलेर जान सक्नुभएन नि त तपाई के भन्नुहुन्छ ?
राजपासँग पहल नै सहमति गरेको छैन त मिल्छ कसरी ? राजपा आफुलाई लोकतन्त्रवादी लोतान्त्रिक पार्टी भन्छ । नेपाली काँग्रेस पार्टीसँग नजिक छु भन्छ । अनि नेपाली काँग्रेसले पहल नै गरे पहल गर्नुप¥यो नि सिटको लागि, मैले त हाम्रो कमजोरी हो भन्छु । दोस्रो कुरा सभामुखमा तटस्थ व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने कुरा एकदम सही हो ।
नेपाली काँग्रेसले जुन निर्णय गरेको छ, त्यसलाई म अन्यथा भन्दिन तर द्वन्द्वकालमा आरोपित व्यक्ति त्यसमा हामीहरुले उम्मेदवारी दिएनौं । हामीले सभामुख तटस्थ हुनुपर्छ भनेर मात्र भन्यौं । पुरा जगत हसायौं । हामीले देशभरीका नागरिक समाज, लोकतन्त्रवादी, जनता सबैलाई हसायो नेपाली काँग्रेसले, प्रोटेस्टको नाममा पनि हामीहरुले उम्मेदवार दिनुपथ्र्यो तर दिएनौं ।
तपाईहरुको जित्ने आधार पनि त थिएन नि तपाईहरुकै सहयोगमा अग्नि प्रसाद सापकोटालाई निर्विरोध बनाइयो नि किन ?
हाम्रो गल्ति भयो । उपसभामुख नेपाली काँग्रेसलाई दिइहाल्छ भनेर रामचन्द्रजी र शेरबहादुरजी गएर भेट्नु भएकै हो त ओली र प्रचण्डजीलाई, खोइ अब दिने भयो त ? लेनदेन हुन्छ, राजनीतिमा कति ठुलो भुल भयो, हाम्रो । राजनीतिक पार्टी भनेको जनताको नजरमा तपाई सँधै खरो उत्रिनुस् । एउटा द्वन्द्व कालको हत्याको आरोपित व्यक्ति जसको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ । सर्वोच्चले पनि कस्तो गरिदियो भने त्यो त मिलेर गरेको जस्तो देखियो । अदालतमा मुद्दा हेर्नै नमिल्ने न्यायाधिश हुनु त्यो त अदालत, सरकार सबै मिलेर यस्तो गरिराखेको छ यति त बुझ्छौं हामी पनि यसमा पनि केही शंका छ ?
२०७६ माघ २०, ०६: ५१: ५९